Arabisc: Fitetezana An-tsary Ny Ao Afovoany Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2017 14:56 GMT
(Fanamarinana: Lahatsoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2007)
Leo an'ireo resaka rehetra momba ny politika ao Afovoany Atsinanana ve ? Izaho koa. Ny herinandron'ny 19 Febroary 2007 dia hanao fitetezana an-tsary ny ao amin'ilay faitra isika, hiato ao Qatar, Bahrain, Tonizia ary Libanona, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo. Tena misy mpakasary mahatalanjona mihitsy mivoaka avy any, ary malaky miova be ny toerana manodidina sy ny toepo, miala aminà firenena iray mankaminà iray hafa.
Isaky ny sary tsirairay mamintina be lavitra noho ny teny an'arivony ny hasarobidiny, miomàna hanao fitetezana kisendrasendra, izay afaka hamenoana pejy maro anaty boky. Ooops…ny tontolon'ny habaka mantsy no tiako ambara e.
Fiatoantsika voalohany i Casablanca, ao Maraoka, toerana ahitanao fa tsy araka izay nosaininao ny zavatra hitan'ny masonao. Navoakan'ny Maraokana iray ao Washington ny sary iray nalefa voalohany tany aminy. Tamin'ny voalohany, mety hihevitra ianao hoe korontana ilay izy.
“Olona mivangongo mirohotra aminà orinasa iray vaovao fivarotana finday izay manome ny tolotra tsara indrindra amin'ireo telefona finday vaovao. Ahatsiarovako ny varotra rehefa Zoma Mainty any Etazonia ireto olona marobe ireto, saingy ity farany somary mba misy fandaminana ihany,” hoy ny nomarihan'i Adil R.
Mbola ao Maraoka ihany, entin'i Laila Lalami hiaraka aminy isika ho any amin'ny Foaran'ny Boky ao Casablanca, ato.
Avy any Maraoka isika dia ho any Libanona, toerana amelàn'i Manamania antsika hitopy amin'ny fomba nofinidin'ny sasany amin'ireo Libaney hankalazàny ny fanamarihana ny tsingerintaona namonoan an'ilay Praiminisitra fahiny Rafiq Al Hariri. Misy sary marobe ao amin'ity tranonkala ity, ary hatrany amin'ireo biloagy Libaney marobe hafa koa.
Noana ve? Ndao hiato hihinana sakafo tonga dia vonona ao amin'ny Mc Donald ao Bahrain, terana itondran'ilay bilaogera Yonis ho antsika ity sary mampitokiky ahitàna mpitaingina soavaly ity, teo am-pametrahana fanafarana entana ho entina! Vitany tsara mihitsy ny nanome lohatenyazy io : Filefàna: Fomban'i Bahrain !
Fony nanapika ity sary ity i Yonis, dia teny an-dàlany indrindra hody avy any amin'ny tany efitra, toerana misy ireo trano lay natsangan'ireo marobe ao an-toerana sy ireo firenena mpila ravinahitra avy any Bahrain, sy mandava izany any an-tany efitra, manararaotra ny lohataona vao miandoha.
Qatar Living mandefa sary iray ahitàna ireo trano lay ao Qatar mazava ho azy. Aonao atao koa ny mijery sary mahafinaritra avy ao Qatar ato. (fanamarihana avy amin'ny mpandika: efa maty ny lahatsoratra namoahan'i Qatar Living ny sary avy aminy, ka novàna ny rohy hijerenao ny sarin'ireo trano lay avy ao Qatar)
Efa miresaka ny lohahevitra momba ny tany efitra sy ny soavaly ihany, ndeha isika hiato ao Libia, toerana aitondran'ilay bilaogera A. Adam antsika hetsika iray avy aminà hazakaza-tsoavaly ao amin'ny fireneny.
Avy ao Libia, dia hifindra ho ao Tonizia isika, fantatra kokoa amin'ny hoe Green Tunisia (Tonizia Maitso), noho ity antony ity: mandefa sary mahatalanjona avy any amin'ny faritra ambanivohitra ilay bilaogera, Saied Dardour, any ianao dia afaka mahita ondry miraoka ahitra ary sasantsasany amin'ireo zavamaniry ao amin'ny firenena amin'ilay izy mamelana iny indrindra.
Mbolanoana indray ve? Sary iray no alefan'i Dardour eto ahitàna ny heveriko fa karazana memy na fàtana (lafaoro), ampiasaina hahandroana ilay mofo Toniziana nentidrazana. Misy avy any Tonizia ve ato ?
Dia mbola fiatoana farany ataontsika ny ao Bahrain, toerana itndran'ilay bilaogera, Mohammed Zainal, antsika hiverina any amin'ny taona 1961, miaraka aminà sary marobe tsy misy anànany maribolana na iray aza.
Alefa ary isika rehetra mba samy milalao manao ankamantatra izay ho anarany e.